ရုပ်ချောတဲ့သူတွေသာ နားလည်နိုင်မယ့် ” ရူပါဖြောင့်ရခြင်းဒုက္ခများ...! - Thadin
HomeKNOWLEDGEရုပ်ချောတဲ့သူတွေသာ နားလည်နိုင်မယ့် ” ရူပါဖြောင့်ရခြင်းဒုက္ခများ…!
ရုပ်ချောတဲ့သူတွေသာ နားလည်နိုင်မယ့် ” ရူပါဖြောင့်ရခြင်းဒုက္ခများ…!
May 18, 2019 Kay Kay KNOWLEDGE Comments Off on ရုပ်ချောတဲ့သူတွေသာ နားလည်နိုင်မယ့် ” ရူပါဖြောင့်ရခြင်းဒုက္ခများ…!
မရပါဘူး .. နဂိုချောတဲ့သူက ဘယ်လိုနေနေချောနေတာဆိုတော့ အဝတ်အစားနွမ်းဖတ်ဖတ်လေးဝတ်ထားလည်း ချောနေလှနေမှာပဲ .. ဒါကို တစ်ချို့ကနားမလည်နိုင်ကြဘူး …။
( ၁ ) သူငယ်ချင်းတွေက အပေါင်းအသင်းမလုပ်ချင်တော့ဘူး …။
( ၂ ) ရုပ်ကြည့်ပြီး ကြိုက်ချင်တဲ့သူက အလိုလိုရှိန်နေတယ် …
( ၄ ) အချင်းချင်းအားနာရတယ် …
( ၅ ) လက်ဆောင်တွေ ခဏခဏအပေးခံရတယ် …
( ၆ ) ချေတယ်လို့အထင်ခံရတယ် …
( ၇ ) ဘာလျှို့ဝှက်ချက်တွေရှိသလဲ ခဏခဏအမေးခံရတယ် …
ရုပ်ချောတယ်ဆိုတာ တကယ်တော့ ကျိန်စာတစ်ခုပါ။ တကယ်လို့ ရုပ်ချောရခြင်း က ဝဋ်ကြွေးတစ်ခုဆိုရင် ဒီဘဝနဲ့ပဲအကြေဆပ်ကြပါ လို့ ရုပ်ချောတဲ့သူတိုင်းကို မှာချင်ပါတယ် …။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ တခြားသူတွေ သာမန်ရုပ်ရည်ရှိနေတဲ့အချိန် မင်းတစ်ယောက်တည်းကွက်ပြီးချောနေတာကို ရှက်တတ်ရမယ်လေ …
မိမိတို့ နေအိမ်ကို လာဘ်ပိတ်စေတတ်သော အချက်များ ဖတ်ထားသင့်တယ်နော်…!
This Month : 37409
This Year : 232807
Total Users : 591831
Total views : 2715937